Izixhobo ezi-5 zokuNceda ukuThengisa ukuThengisa kwakho ngeeholide | Martech Zone
Izixhobo ezi-5 zokuNceda ukuThengisa ukuThengisa kwakho Ngexesha leeholide
NgoMvulo, Oktobha 3, 2016 UJohn Theis
Ixesha lokuthenga leKrisimesi lelinye lawona maxesha abalulekileyo enyakeni kubathengisi kunye nabathengisi, kwaye imikhankaso yakho yokuthengisa kufuneka ibonakalise ukubaluleka. Ukuba nephulo elisebenzayo liya kuqinisekisa ukuba uphawu lwakho lufumana ingqalelo elufaneleyo ngexesha elinenzuzo enkulu enyakeni.
Kwihlabathi lanamhlanje indlela yompu ayisayi kuyinqumla xa uzama ukufikelela kubathengi bakho. Iibhranti kufuneka zilungelelanise iinzame zazo zokuthengisa ukuhlangabezana neemfuno ezizodwa zabathengi. Sele lilixesha lokuba kuqalwe ngokwenziwa kwamaphulo abalulekileyo eeholide, ke ngoko senze uluhlu lwezixhobo ezikwi-Intanethi ukunceda kwimizamo yakho yokukhomba kwintengiso yakho.
Akumangalisi ukuba uGoogle akwazi ukwenza iwebhu eyaziwayo kakhulu kubahlalutyi isuti emhlabeni, nge google Analytics. Le software ibonelela ngolwazi lokuba ngubani otyelela indawo yakho, ukuba bafike njani apho, kwaye bakugcwalise kwizenzo zabo bakube kwiwebhusayithi yakho. Sebenzisa olu lwazi lutsha ukufumana awona macandelo akho abathengi anenzuzo kunye nokwenza imiyalezo yokuthengisa ngokufanelekileyo.
I-Google Analytics igqibelele kumashishini amakhulu namancinci njengoko i-suite ifumaneka kwimodeli ye-freemium. Kwinqanaba eliphezulu lesoftware kukho ubukho be-SDK yokuhlalutya ukusebenza kweapp yakho yeselfowuni kunye nabathengi.
Ukuthengisa kweLifu lokuThengisa
lesforce Ilifu lokuThengisa sisixhobo esiluncedo ngokumangalisayo sokuthumela i-SMS kunye nokutyhala izaziso njengezilumkiso eziphathwayo, ukulawula ukuthengisa nge-imeyile, ukulawula imikhankaso yentengiso kunye nedatha yeCRM, kunye nokuqokelela indlela yokuziphatha komkhangeli.
Ukudibanisa ezi zixhobo kubonelela ngamathuba amaninzi okwenza ilizwi lebhrendi elihambelana nayo yonke imizamo yakho yentengiso. Isixhobo ngasinye sivumela iindlela ezininzi zokulandela umkhondo indlela yokuziphatha kwabathengi kwaye ikuvumela ukuba ujolise kwicandelo ngalinye buqu. Olunye usongelo kukuba iSalesforce iza nethegi enexabiso eliphakamileyo, elingenakwenziwa kwiinkampani ezininzi ezincinci.
Uluhlu lwempahla lunokuba nefuthe elinamandla kwindlela ogqiba ngayo ukuba uthengise abathengi bakho. Nokuba uzama ukukhuthaza into ebencanyathiselwe kwiishelufa zakho iiveki, okanye ubhengeze ukuthunyelwa okutsha komthengisi ogqwesileyo, uyakufuna isixhobo solawulo lwempahla, kulapho IBizSlate kungena.
Izisombululo zolawulo lwempahla kunye nolawulo lwe-odolo, ulwabiwo lwempahla, kunye nogcino-zincwadi, i-e-commerce kunye nokudityaniswa kwe-EDI kwenza le software ifezeke kumashishini amancinci naphakathi. Eyona nto ibaluleke kakhulu, ikuvumela ukuba ulandele izinto ezithengwa ngabantu, kukunceda uhambise ukuthengisa kwakho kwimizamo yexesha elizayo.
Ukuba iBizSlate ayilunganga kwishishini lakho, kukho ukubulawa kwezinye iimveliso zolawulo lwempahla ezinokulingana iimfuno zakho.
Ukuba ujonge ukuvelisa isikhokelo kwiifom zakho zeshishini ezikwi-Intanethi, kwimidiya yoluntu okanye kwii-imeyile kunokuba zizixhobo ezikhulu. IFomstack ikunceda wenze iifom zesiko ezikhawulezayo nezilula kwaye ikuvumela ukuba uhlalutye amaxabiso abo okuguqula kunye nokulinganisa ukusebenza kwabo. Isoftware ikunceda ukuba uvavanye iifom zakho kwaye ufumane ezona nguqulelo ziphumeleleyo zeefom zakho zokubamba. Ukongeza, unokubona umxholo weefom ezizaliswe ngokupheleleyo ezingazange zingeniswe.
Nje ukuba usebenzise iifom zakho ezikwi-Intanethi ukubamba isikhokelo ungasebenzisa ifom entsha ukunyanzela ukuthengisa. Kutheni ungasebenzisi enye ifom ukuphinda ubandakanye abathengi emva kokuthenga kwabo kunye nefom yengxelo enxulumene nokuthenga kwabo?
Ukuthengisa nge-imeyile kuhlala kuyinto ebalulekileyo kuso nasiphi na isicwangciso sentengiso, kwaye kuya kufuneka uhlale ukhathazekile malunga nendlela ii-imeyile zakho ezijongeka ngayo kubathengi bakho kwiibhokisi zabo zebhokisi. Ii-imeyile zakho kufuneka zibambe iliso ngelixa zihlala zinyanisekile kuhlobo lwakho. Ufuna ukuba ii-imeyile zakho zibonakale zilungile kubo bonke abathengi be-imeyile abanokujongwa kuzo. Ukuba oku kubonakala ngathi ngumceli mngeni, ungakhathazeki, Imeyile kwi-Acid iyafumaneka ukunceda.
Iqonga livumela ukwenziwa kwee-imeyile ze-HTML kumhleli okwi-intanethi, ukuze ukwazi ukujonga kuqala ukujonga i-imeyile yakho kwinkitha yabathengi, wenze ikhowudi ibe ninzi, kwaye ulandele ukusebenza kwemiyalezo yakho nge kubahlalutyi Suite. Sebenzisa ezi zinto ukuze uzuze kwaye wenze ii-imeyile ezizezakho ngokufanelekileyo ukubandakanya abathengi bakho kunye nokunyusa umdla ekuthengeni.
Ngoku ukuba unezixhobo ozifunayo ukuze wenze izicwangciso zokuthengisa ngeholide, ungafumana umsebenzi wokuyila izicwangciso zakho. Isitshixo sempumelelo kukuqalisa kwangoko, ukuvumela ukuba uvavanye ngokwaneleyo iphulo lakho, kwaye wenze naluphi na uhlengahlengiso ngaphambi kokuba iiholide zifike apha. Ukwenza imiyalezo yakho ibe yeyakho kuya kuqinisekisa ukuba uphawu lwakho lubona impumelelo ngeli xesha lonyaka.
tags: imeyile kwi-asidii-google analyticsIlifu lokuthengisa labasebenzi
UJohn Thies yi-CEO kunye noMsunguli we-Co Imeyile kwi-Acid, Inkonzo enika abathengisi be-imeyile umbono wendlela ii-imeyile zabo eziboniswa ngayo kubathengi be-imeyile abadumileyo nakwizixhobo eziphathwayo. Uhlala eDenver, eColorado kunye nenkosikazi yakhe nonyana. Xa engasebenzi nokuba ukwigalufa okanye ukukhwela ikhephu kwifowder entsha yeColorado.
Ngaba singacela ukuNgcono ekuzithengiseni?
Iindlela ezi-5 zeKhalenda yoMsitho wakho inokuPhucula i-SEO